Ejirila mmiri mee ka mmiri dị jụụ ma kpoo ikuku na ikpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite nke ikpo ọkụ na ikuku ikuku. Ikpokọta nke mmiri mmiri na nsonaazụ eriri igwe na-esikwa na otu ogologo oge. Ọ bụ sistemụ nhazi nke ọtụtụ oge enwere ike igbochi.
N’isiokwu a, anyị depụtara aro ole na ole ga - enyere gị aka igbochi eriri mgbazinye na oyi.
1. Ọ bụrụ na ngalaba anaghị arụ ọrụ n'oge oyi, mmiri niile dị na sistemụ ahụ ga-ahapụrịrị iji gbochie mgbawa eriri igwe.
2. Maka ọnọdụ mberede dị ka nkwụsị ọkụ ma ọ bụ mmezi ọkụ eletrik, ikuku ikuku kwesịrị imechi ozugbo iji hụ na ikuku n'èzí abanyeghị na usoro ahụ. A naghị agbapụta mmiri site na eriri igwe na ịdata okpomọkụ n'ime AHU nwere ike ibute kpụ ọkụkụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime AHU kwesịrị idobe karịa 5 ℃.
3. Nhicha eriri igwe na mmiri nzacha mgbe niile. Ihe agbadoro na paịpụ na-eme ka mmiri adịghị agagharị. Liquid ọnyà ke eriri igwe tube n'ihi eriri igwe mmebi mgbe ifriizi ọnọdụ bụ ugbu a.
4. Ezighi ezi njikwa usoro nhazi. Controlfọdụ sistemụ njikwa na-agbanwe oghere mmiri ka ọ ghara ịsọ ọsọ dabere na njikwa ọnọdụ ime ụlọ. Enweghị njikwa na-akpata mgbasa mmiri na-adịghị ike na oke ikuku dị elu, na-eme ka mmiri kpọnwụrụ akpọnwụ. (A na-achịkwa ọsọ ọsọ mmiri na eriri igwe na 0.6 ～ 1.6m / s)
Okirikiri nke eriri igwe ebe nrụgide na-ewu, na ebe kachasị ike na sekit ahụ. Nnwale dị ukwuu egosila na ọdịda ahụ ga-apụta dị ka mpaghara bloated na ọkpọkọ ọkpọ ma ọ bụ gbagọrọ agbasawanye nke gbasaa. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ mpaghara ga-agbawa.
Biko lee anya n'okpuru maka mgbakọ mgbali n'ihi eriri igwe oyi kpọnwụrụ.
ε = asingbawanye Olu (Ọnọdụ: 1 nrụgide nke ikuku, 0 ℃, olu nke 1 n'arọ mmiri)
ε = 1 ÷ 0.9167 ＝ 1.0909 (9% Mbuli olu)
E = modulus nke ekwedo na erughị ala (Ice = 2800 n'arọ / cm2)
Nsogbu ojoo bụ ihe kpatara ifriizi emebi na eriri igwe. Nsogbu eriri igwe n'ihi na mmiri mmiri ifriizi na-emetụta oke nrụgide mepụtara n'oge e guzobere ice. Mpaghara nke nwere ice a nwere ike ijikwa nrụgide a agbakwunyere ruo mgbe ọ ruru oke nke na-akpata mmebi nke onye na-ekpo ọkụ na ọdịda na-esochi.
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara nchebe ikuku na-ekpuchi ikuku, kpọtụrụ Airwoods taa! Anyị na-eduga zuru ụwa ọnụ na-eweta nke otutu HVAC ngwaahịa na-ewu ikuku àgwà ngwọta na azụmahịa na ulo oru ahịa. Nkwenye anyị bụ inye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ kacha mma na ọnụ ọnụ ọnụ ma mepụta gburugburu obibi ka mma.